‘पोस्ट–ट्रम्प’को अमेरिका कस्तो होला ? – Nepal Press
‘पोस्ट–ट्रम्प’को अमेरिका कस्तो होला ?
२०७७ माघ ५ गते १५:३४
त्यस समय ओबामालाई यसरी भव्य समारोहबीच विदाई गरेका वर्तमान राष्ट्रति डोनाल्ड ट्रम्पले यसपटक भने त्यसरी विदाई नलिने हुनुभएको छ । उहाँले आफू राष्ट्रपति जो बाइडेनको सपथ समारोह (इन्यागुरेसन सेरेमनी) मा सहभागी समेत नहुने बताउनुभएको छ । जसका कारण यसपटक भने नयाँले अघिल्लो कार्यकालका राष्ट्रपतिलाई विदाई गरेको यो बडो आकर्षक दृश्य देखा नपर्ने प्रायः निश्चित छ । यही २० जनवरीमा हुन लागेको सो समारोहमा आफू उपस्थित हुन्छु भनी राष्ट्रपति ट्रम्पले पुनः भन्नुभएछ भने कुरा बेग्लै भयो, अन्यथा त्यो दृश्य नदेखिने अमेरिकी ‘मिडिया’का रिपोर्टिङमा आइरहेकै छ ।
तर नागरिक सर्वाेच्चताको ओबामाको सो उद्गार अहिलेका राष्ट्रपति ट्रम्पबाट भने आउने जस्तो प्रायः देखिन्न । बरु त्यो सर्वाेच्चता भत्किएको अवस्था देखिँदैछ । गत जनवरी ६ मा राष्ट्रपति ट्रम्पकै समर्थकले मुलुकको संसद भवन क्यापिटल हिलमा गरेको आक्रमणले नागरिक सर्वाेच्चतामाथिको राष्ट्रपतिको निष्ठामाथि नै सन्देह पैदा गरेको मात्र होइन अमेरिकी इतिहासका लागि सदा यो प्रश्न थपिदिएको छ । यसैकारण पनि उहाँले कार्यकाल सकिन केबल हप्ता दिन बाँकी रहँदासम्म पनि ह्वाइट हाउसमा महाभियोग खेप्न विवश हुनुहुन्छ । विश्वको एक सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तिले आफ्नो चार वर्षको कार्यकाल सकेपछिको विदाई कस्तो हुँदैछ भन्ने कुरा त बेग्लै भयो ।
राष्ट्रपति ट्रम्प सबै अमेरिकी नागरिकको सद्भाव र माया भन्दा पनि आफ्नो कार्यकाल सकेर निवास फर्किँदा अभियोग बोकेरै फर्किनुहुने भएको देखिएको छ । त्यसो त उहाँमाथि सदैव आउने नागरिक सर्वाेच्चताको प्रश्न आउने नै छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र प्रजातान्त्रिक संस्कार अमेरिकीले कसरी ग्रहण गर्छन् र तेस्रो विश्वलाई सिकाउँछन् भन्ने प्रश्न पनि अब अमेरिकीहरुले संसारका विभिन्न भूगोगमा पुगेर सामना गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । यी सबै प्रश्नहरु कति आफूसँग, कतिपय अमेरिकी जनताको मन मष्तिष्कमा र केही ह्वाइट हाउसमै थाँती राखेर फर्किदैहुनुहुन्छ राष्ट्रपति ट्रम्प ।
अनि ‘ओभल अफिस’को घर्रामा बाराक ओबामाले हातैले लेखेको अनुभव मिश्रित चिठीमा जस्तो नागरिक सर्वाेच्चताको सम्मानको भाषा भने सायद उहाँको अनुभव पत्रमा नपर्न सक्छ । अर्को कुरा अहिलेको विश्वका नागरिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सारथि बनेका फेसबुक ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जालहरुले उहाँका अभिव्यक्तिलाई असामाजिक भनेर प्रतिबन्धित गरिसकेका छन् । जसका कारण लगभग घन्टाघन्टामा ‘अपडेट’ गर्ने गरिएको उहाँको ट्वीटर अकाउन्टमा आफू ह्वाइट हाउसबाट निस्किन लागेको तस्वीर पोष्ट गर्ने स्थान पनि अहिलेलाई उहाँले सुरक्षित राख्न सक्नुभएन । यसैले अमेरिकी इतिहासमै यो एउटा नयाँ प्रकारको सत्ता ‘शक्ति’ हस्तान्तरणको उदाहरणका रुपमा रहनेछ ।
प्रकाशित: २०७७ माघ ५ गते १५:३४